Vivaldi 3.6 inowedzera mutsara wechipiri kudzivirira akaunganidzwa tabo | Linux Vakapindwa muropa
Imwe nguva yapfuura ndakaita hurukuro pfupi neshamwari nezve mabhurawuza. Ini ndinoshandisa Firefox, yakavhurwa sosi uye inozivikanwa kwazvo; akashandisa protagonist yeiyi posvo, uye chikonzero chevanhu vakaita saiye chiri nyore: inopa akawanda mabasa anonakidza evanoda vashandisi kana "vashandisi vemasimba". Semuenzaniso, iye yemuno tsamba, nhau uye karenda mutengi kana kupatsanura skrini, zvese muhwindo rimwe chete. Nhasi, kambani akakanda Vivaldi 3.6, gadziriso iyo inowedzera imwe inonakidza mukana.
Ini pachangu, ini handifarire kuve nemazhinji matabhu akavhurwa, asi ndinoziva vanhu vane chaiwo gumi nemaviri acho. Kubva X huwandu, mune mamwe mabhurawuza iwo matabhu anotanga kudzikira. Ichi chinhu chinonyanya kuoma muVivaldi 3.6, sezvazvakaita akawedzera kugona kuwedzera wechipiri mutsara sezvatinoona mumusoro kubatwa.
Vivaldi 3.6 inosimbisa
Mutsara wechipiri wemathebhu wakawedzerwa.
Propecetary codecs akagadziridzwa kuita 87.0.4280.66 paLinux.
MuWindows, iwo ma tabo anogona kuratidzwa pakupera kwemamenyu makuru.
Pane macOS, iyo UI inoshandurwa musystem font pane macOS 11, iyo Dzorera Sparkle raibhurari yakagadziridzwa kusvika 1.24, uye iyo icon yekushandisa yakagadziridzwa kuti ive nani kukwana Big Sur.
Kunatsiridzwa kweCherechedzo chimiro.
Hangouts ikozvino inodzorwa neiyo Chromecast media-router.
Yakagadziridzwa injini kuChromium 88.0.4324.99.
Vivaldi 3.6 ikozvino iripo kubva papeji rekuvandudza, iro rinogona kuwanikwa kubva Iyi link. Vashandisi veLinux vane kugoverwa kunowedzera iyo repository mushure mekutanga kuisirwa vanofanirwa kunge vaine iyo yekuvandudza iripo. Mune mamwe masisitimu, seManjaro ayo andinoshandisa pane imwe malaptop angu uye kwaanenge ari mumahofisi epamutemo, zvichiri kutora mazuva mashoma kuti asvike.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vivaldi 3.6 inowedzera wechipiri mutsara kudzivirira ma tabo kubva kuunganidze
Ndiri kuishandisa, uye ndinoifarira. Kuenzaniswa neFirefox, Vivaldi inonzwa nekukurumidza kana ichirodha mamwe mawebhusaiti uye zvisina basa kutaura nekubatanidzwa neKDE Plasma dialog dialog.
Chinhu chimwe chete chakashata chandinoona ndechekuti saizi yefonti idiki (kunyangwe ndichifunga kuti izvi zvinoitika nemhuri yese yeChromium)